Radio Ergo 18 May, 2017 PUNTLAND
(ERGO) - Hay’adda maareynta masiibooyinka Puntland ee HADMA ayaa ka digtay in la joojiyo gargaarka la siiyo reer miyiga inta ay isku filnaanayaan. Hay’adda waxa ay sheegtay in roobka da’ay uusan manaafacaad wali u yeelan xoolo dhaqatada.
Abaarta oo saddex sano xiriirsaneyd waxa ay leysay xoolo badan, halka kuwa harayna aanay lahayn caano iyo hilib si ay ugu noolaadaan reeraha ay xoolaha yari u hareen.
Maareeyaha hay’adda maareynta masiibooyinka Puntland Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ceyroow ayaa sheegay in xoolo dhaqatada u baahan yihiin in muddo Lix bilood ah ugu yaraan la sii caawiyo inta ay xoolaha ka soo kabsanayaan, isaga oo ka digay khattarta ka dhalan karta haddii hay’adaha iyo samfalayaasha ay gurmadkooda ku saleeyaan xaddiga roobka da’ay.
“Waxay u baahan yihiin in nolosha laga caawiyo ilaa inta xooluhu manfac yeelayaan ama neefku u gadmi karayo, ugu yaraan Lix bilood amaba ay u dhalayaan oo caano ka helayaan, arigaa ugu dhow oo shan bilood qaadanaya” ayuu Cayrow Ergo u sheegay.
20,000 oo qof oo abaarta ku xoolo beelay ayaa la diiwaan geliyay intii u dhaxeysay November-tii hore ilaa Febraayadii la soo dhaafay in ay magaalooyinka Puntland u soo barakaceen, sida ay xaqiijisay waaxda arrimaha barakacayaasha ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland.
Cabdi Jaamac Warsame, waa abaaha 18 carruur ah, waxa uu tuulada Meyle oo 120 Kiiloomitir koofurta ka xigta Garowe ku dhaqanayaa 30 neef oo arhi ah iyo 10 Geela oo ka haray 700 neef oo ari iyo geel iskugu jira, waxa uu sheegayaa in aysan jirin wax dhaqaale ah oo ka soo gala xoolahiisa maadaama ay weyd yihiin, caanana aysan lahayn oo saddexdii sano ee la soo dhaafay uusan jirin neef dhalay.
“Hadda rimay lagaga xisaabtamayaa ma jiro. Waxaa xoolaha wax laga rajaynayaa gu’ga gu’giisa kale hadii roobku isa soo raaco oo fiicnaado” ayuu yiri Warsame.
Cabdullahi Cawil oo ku nool tuulada Galcad oo 40 Kiiloomitir u jirta degmada Taleex ee gobolka Sool isla markaasna bartamihii Abriil reerkiisa ka soo celiyay miyiga Isku-shuban ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in 120 ido ah oo ugu rimay Bari ay isla bakhtiyeen, isla markaasna riyuhuna ay ka dhiciyeen
Rimayga xoolahu waxa uu ku xiran yahay sida ay u dhiigeystaan sida uu qabo Cabdullaahi Cawil oo heysta 150 ari ah oo ka hartay saddex tiro oo uu dhaqan jiray abaarta ka hor.
Cawil ayaa ka cabsi qaba in isaga iyo reerkiisa ay gaari waayaan guga soo socda inta ay xoolaha hadda rimaya ka irmaanaadaan, kuwa kalana ay yeeshaan hilib la iibsado.
“Hadda kama cabsaneyno in ay xoolaha naga dhintaan, balse inaga iyo carruurteena ayaa ka baqeyno inaan gaajo iyo qaboow u baaba’no,” ayuu Ergo u sheegay.
Cawil waxa uu hadda reerkiisa ku maareeyaa lacag deyn ah oo uu ka qaatay ganacsato ay is yaqaannaan, taas oo uu rajeynayo in uu bixiyo marka ay xoolaha noqdaan kuwa gadmi kara. $2,500 oo masaarif iyo kirada gaadiidka uu xoolaha ku raray ah ayaa hadda lagu leeyahay, weyna adagtahay in uu iska bixiyo xilli dhow haddii uusan kaalmo helin.
Roobka ka da’ay deegaannada Puntland waxa uu buuxiyay keydadkii biyaha, dhulkana wax yar oo doog ah oo xoolaha nafta ku celiyay ayaa ka soo baxay, balse digniinta HADMA ayaa ah mid ku wajahan cunna yarida heysa dadka oo aan wali xal loo helin.
Barakacayaasha iyo Qaxootiga (750)